बिष पशुपतिले दिए अघोर बाबालाई खुल्ला चुनौती, भने, ”श्रीमती हेर्दै धोकेबाज जस्ती छे” ! ( भिडियो हेर्नुस ) – Nepal Trending
काठमाडौं : अहिले सामाजिक संजालमा अघोर बाबाको निक्कै चर्चा हुन्छ । उनको हरेक गतिबिधी सामाजिक संजालमा हाँसोका बिषय बन्न थालेको छ । अझ बाबाको बोली, गफको निक्कै प्रसम्सक पनि छन् । उनी रमाईला र समसामयिक बिषयमा कुरा गर्न माहिर भएका कारण उनको समर्थनमा धेरै जसो युवा युबती देखिन्छन् । उनै बाबाले बिहे गरेको कुराले धेरै अचम्मित भएका थिए । कसैले समर्थन गरेका थिए भने कसैले आपत्ति पनि जनाएका थिए ।
अहिले झन उनको श्रीमतीका कुराले झन धेरैलाई अचम्मित गराउने कुरा बाहिरिएको छ । अघोर बाबाकि श्रीमतीको पुरा नाम सारदा पाण्डे हो। अघोर बाबासंग बिहे गर्ने बित्तिकै चर्चा चुलिएकि पाण्डे उनले गरेकी कर्तुत अहिले पर्दाफास भएको छ । उनले बिगतमा १ वर्ष अगाडी आफुलाई आफ्नै लोग्नेसंग बिहे गरि अमेरिका लान्छु भन्दै फसाएकि मिना (नाम परिवर्तन) अहिले मिडियामा आएकी छिन् ।
अहिले बाबाको बिषयमा अनेक चर्चा परिचर्चा भईरहेका छन् । झन शारदा पाण्डेसंग बिहे भएको खबर आएपछि त झन् उनको बरेमा नकारात्मक प्रतिक्रिया ओहिरिन थालेको छ । यसैबीच बिष पशुपति बाबाले पनि अघोर बाबा र उनकी श्रीमती पाण्डेको बारेमा आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेका छन् । यसै बिषयलाई लिएर बिष पशुपति बाबा पनि मिडियामा आएका छन् ।
हेरौँ बिष बाबासंग गरिएको कुराकानी तलको भिडियोमा :
आधा रातमा किन आइन् जेरी श्रीमानसँगै फेसबुक लाइभमा – भिडियो सहित
रोडमा गाएर बुढो बुवाआमा पाल्ने रिता राई ! भ्वाइसबाट बाहिरिएपछि रोडमै पुग्ने डरले…
अब त अति भयो ! बाबाले भने मलाई नेपाली मन पर्दैन , श्रीमतीलाई समेत थर्काईन् ( भिडियो…
बिहे गरेपछि स्त्री लम्पट भन्दै गालि गर्नेलाई भाईरल बाबाले दिए यस्तो चेतावनी ( भिडियो…
अ’घोर बाबाले गरे बिहे, गंगा साक्षी राखेर खाए बा’चा क’सम, यति सुन्दरी छिन श्रीमती…